Xisbiga KD: “Silsiladdo koranteeysan ha lugu xiro kuwa sharciyadda loo diido si eeysan u dhuumaaleeysan” | Somaliska
Xisbiga Kristdemokraterna ee marka loo soo gaabiyo loo yaqaano KD, ayaa soo bandhigay fikrado ay ku doonayaan in lugu xakameeyo dadyowga sharciyadda loo diido ee dalkaan Iswiidhan.
Gudoomiyaha xisbigaasi haweeneyda lugu magacaabo Ebba Busch Thor, ayaa sheegtay in xal ula muuqdo dadyowga sharciyadda loo diido in lugu xirro silsiladaha koranteeysan oo dhaq dhaqaaqooda lugula socon karo.
” Maanta waxaa jira tiro yar oo kooban oo ku jira xeryaha kuwaas oo suganaya in dalka laga dhoofiyo, halka qaar kaloo badana ay baaqi ku yihiin dalka, taas oo aan loo oggoleeyn. Waxaase jira qayaar kale oo ah in sil siladaha koranteeysan lugu xirro kuwa iyaga loo diido sharciyada ee ay laanta socdaalka u aragto kuwo aan sharciga raaaceyn (dalka ku dhuumaaleeysanaya) kuwaas oo ay misna booliska ammaanka ku taliyeen inaan sharci la siin” ayey tiri Ebba oo tilmaameeysay in dadyowga sharciyada loo diida ay tahay dariiqa keliya ee lugu ogaan karo halka ayey ku dhuumaaleeysanayaan.
Waxaa kale oo ay sheegtay in hindisaheeda aannu aheyn mid quseeya dhamaan magangalyo doonka sharci sugayaalka ah, balse ay ula jeedo kuwa sharciyada loo diiday. Sidoo kale mar ay ka hadleeysay sida hindisiheeda u noqon karo mid wax gal ah iyo tiradda dadka la doonayo in lugu xirro silsaladaha koranteeysan ayey tibaaxday ineey tahay mid aan siyaasinta oo keliya looga fadhin go’aan gaaristeeda ee ay tahay in siyaasi kasta oo mas’uul ah uu fuliyo.
Ciidanka ammaanka ayaa laanta socdaalka ku talo siiyey ineeysan sharciyada siin dad gaaraya kun qof oo haatan dalka si dhuumaaleeysi ah u jooga. Tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaaladda Stockholm caasimmadda Iswiidhan horaantii bisha abriil ee ina dhaaftay, ayaa dowladdu waxaa ay soo saartay go’aano adag oo ay ku dooneeyso ineey ku daba gasho magangalyo doonka sharciyadda loo diiday. Iyadoo weerarkii dadka lugu laayey uu ahaa mid uu fuliyey nin magangalyo doon ah oo sharciga loo diiday.
Waxaa iga suaal ah arinkaan soomali ma quseeyaa aqyaartaay qofkii jawaab kahaayo fadlan haii soo faah faahiyo waad mahadsantihiin